Umaki: imithetho yokukhomba | Martech Zone
Umaki: imithetho yokukhomba
NgoLwesithathu, Septemba 23, 2015 NgoLwesibili, Septhemba 22, 2015 ULara Albert
Uma kukhulunywa ngokunciphisa ukukhwabanisa kwamakhasimende, ulwazi lunamandla ikakhulukazi uma lusesimweni sokuqonda kokuziphatha okunothile. Njengabamakethi senza konke okusemandleni ukuqonda ukuthi amakhasimende aziphatha kanjani nokuthi kungani eshiya, ukuze sikwazi ukukuvimbela. Kepha lokho abathengisi abavame ukukuthola yincazelo ye-churn kunokuba isibikezelo sangempela sengozi ye-churn. Manje ufika kanjani phambi kwenkinga? Ubikezela kanjani ukuthi ubani